“UDokotela oyiSangoma” uxuba ikhambi lendabuko nomuthi wesilungu | Scrolla Izindaba
“UDokotela oyiSangoma” uxuba ikhambi lendabuko nomuthi wesilungu
Ufundele ubudokotela e-Cuba iminyaka eyisikhombisa ukuze abe ngudokotela.
Wabe esebuyela eNingizimu Afrika wachitha izinyanga eziyi-14 eziqeqeshela ukuba yisangoma.
Manje, uMkhulu Seanego ungudokotela oqeqeshiwe e-Charlotte Maxeke Academic Hospital eGoli – futhi uhlolela amakhasimende endumba yakhe e-Soshanguve, e-Tshwane.
Waziwa yiziguli zakhe kanye namakhasimende akhe njengo”Dr Sangoma”, uMkhulu uthe uzalwe enesipho sokuprofetha umndeni wakhe wazi ngaso kusukela eneminyaka eyisishiyagalombili.
“Isipho sami sokuprofetha singikhombisa izinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo,” utshele abakwa-Scrolla.Africa esendumbeni yakhe.
“Ngesikhathi ngiseyunivesithi, ngangitshela abantu izimfihlo zabo nezinto ezenzeka emindenini yabo. Abantu abaningi bebengakuthandi ukuba seduze kwami ​​ngenxa yalokho.”
UDr Sangoma uzalwe emndenini wezelamani eziyisishiyagalolunye.
“Izingane zakwethu ziyeke isikole ngoba umama, owayesebenza emakhishini, nobaba wami owayengasebenzi, babengenayo imali yokukhokhela imfundo yethu,” uyasho.
“Kodwa ngenhlanhla omunye wothisha wangithatha wangisiza ngathola umfundaze wokufundela ubudokotela e-Cuba ngakho ngaphunyuka ekuyekeni phansi isikole.”
Uthe imisebenzi yakhe emibili yokuba udokotela nesangoma ihlangana kahle.
“Ngaphambi kokuthi ngiphume endlini ngiyosebenza njengodokotela, ngikhuluma nokhokho bami ukuze bangihole usuku lonke,” uyasho.
“Ngitshela okhokho bami ukuthi ngizobe ngihlinza abantu abakwazi ukondla izingane zabo futhi ngidinga ukuthi bangisize ukuze ngenze umsebenzi ophumelelayo.”
Uthe kuqala wayengafuni ukuba yisangoma.
“Kodwa ngemuva kwazo zonke izimpawu ezazingikhombisa ukuthi okhokho bami babefuna ngifeze lokho ababefuna ngikwenze, okuwukwelapha abantu, kwakumele ngamukele.
“Ngazalelwa ukwelapha,” kusho yena.